Horudhac: Manchester City vs Aston Villa… (Sky Blue oo tan iyo 2019 hoggaanka u qaban karta horyaalka Premier League) – Gool FM
(Manchester) 20 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa u dhaqaaqi karta hoggaanka horyaalka Premier League markii ugu horreysay tan iyo bishii Agoosto ee sanadkii 2019-kii, haddii ay guul kaga gaartaan Aston Villa garoonkooda Etihad oo ay caawa ku soo dhoweynayaan.
Tababare Pep Guardiola Kooxdiiisa ayaa dib u soo laabatay, iyagoo ugu cadcad hanashada horyaalka, inkastoo aan la saadaalin karin kooxda qaadeysa Premier League kal ciyaareedkan oo uu yahay horyaalku mid isku dhafan.
Yeelkeede, haddii ay Man City garaacdo Aston Villa, waxay hoggaanka u qaban doontaa horyaalka Premier League, halka Aston Villa ay fadhiso kaalinta 11-aad ee kala horreynta horyaalka Premier League.
Manchester City ayaa markale dhaawac ku weyn doonta daafaceeda Aymeric Laporte iyo weeraryahankeeda Sergio Aguero, kaasoo kulankiisii afaraad ku seegaya karaantiil.
Kevin De Bruyne ayaa u muuqda inuu ka gudbay walaacii laga qabay ee ku aaddanaa dhibaato yar oo uu ka sheeganayey canqowga.
Tababaraha Aston Villa ee Dean Smith ma magacaabi doono sagaal ciyaartoy oo laga helay Korona Fayras intii lagu jiray xaaladda caabuqan dunida ku faafay, laakiin wuxuu sheegay in kooxdiisa ay saameyn ku yeelan doonto.
Ross Barkley ayaa laga yaabaa inuu ku lug yeesho kulankan kaddib labo bilood uu ku maqnaa dhaawac muruqa ah.
>- Manchester City ayaa guuleysatay 14 ka mid ah 15-keedii kulan ee la soo dhaafay oo ay garoonkeeda ku soo dhoweysay horyaalka naadiga Aston Villa, waxaana ku jira 10-kii la soo dhaafay, iyagoo celcelis ahaan ka dhaliyey 33-4.
>- Aston Villa ayaa guul la’aan ah sagaalkii kulan ee ugu dambeeyey tartammada oo dhan, iyadoo barbaro gashay hal kulan, isla markaanka guuldarro la kulantay siddeedda kulan ee kale.
>- Guushii ugu dambeysay horyaalka ee Villa ay ku soo gaarto garoonka Etihad waxay ahayd ciyaar ku dhammaatay 2-0 oo dhacday bishii April ee sanadkii 2007.
>- Manchester City ayaa guuldarro la’aan ah 15-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay tartammada oo dhan, waxaana ay guul gaartay siddeedeedii kulan ee la soo dhaafay.
>- Man City ayaa qaadatay 23-dhibcood 27-keedii dhibcood ee suurogalka u ahaa, waxaana ay haystaan shan guul oo xiriir ah horyaalka.
>- Waxaa laga dhaliyey kaliya saddex gool intii lagu guda jiray 22 saacadood iyo 55 daqiiqo.
>- Kooxda Tababare Pep Guardiola ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay lix ka mid ah sagaalkeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay illaa iyo hadda fasal ciyaareedkan 2020-21.
>- Manchester City ayaa kaliya guuldarro la kulantay mid ka mid ah 22-keedii kulan ee ugu dabeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay tartammada oo dhan, waxa ay guuleysteen 19 kulan, waxaana ay barbaro galeen labo kulan oo kale.
>- Man City ayaa kaliya laga dhaliyey hal gool 10-kii kulan ee John Stones iyo Ruben Dias ay si wadajir ah uga wada ciyaarayeen daafaca dhexe.
>- Ilkay Gundogan ayaa dhaliyey afar gool lixdiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu ciyaaray horyaalka.
>- Villa ayaa guuleysan karta in ka badan siddeed ka mid ah 16-keeda kulan ee ugu horreeya ee furitaanka u ah horyaalka heerka koowaad markii ugu horreysay tan iyo fasal ciyaareedkii 1989-90.
>- Waxa ay guuleysteen shan ka mid ah siddeedoodii kulan ee ay bannaanka ku soo ciyaareen horyaalka oo ay marti ahaayeen, waxaana ay barbaro galeen hal kulan, halka ay khasaaro la kulmeen labo kulan.
>- Kooxda Dean Smith ayaa guuleysatay labo ka mid ah saddexdoodii kulan ee xilli ciyaareedkan ay wajaheen kooxaha afarta sare ee horyaalka.
>- Villans waxay u baahantahay hal guul oo horyaal ah si ay ula mid noqoto ama u barbareyso sagaalkii guul oo ay gaartay xilli ciyaareedkii hore oo dhan.
>- Ollie Watkins ayaan wax gool ah dhalin siddeed kulan, laakiin isago waxa uu dhaliyey siddeed gool 10-kiisii kulan ee ugu horreeyey oo uu u saftay Aston Villa.
>- Jack Grealish ayaa gacan ka gaystay 12 gool 15 kulan oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan, waxa uu dhaliyey shan gool isagoo caawiye ka ahaa todobo kale.